Fifaninanana hidirana ao Antetezambaro: Ho fantatra anaty 48 ora ireo 500 afaka
Published Date: 3 octobre 2021
Ora sisa no isaina. Araka ny lalàna, dia 48 ora aorian’ny fanaovana « délibération » ny famoahana ny lisitr’ireo mpiadina afaka tamin’ny dingana faharoa, amin’ny fifaninanana hidirana ao amin’ny Sekolim-pirenena manofana Mpandraharahan’ny Fonja (ENAP), ao Antetezambaro, Toamasina. Ho fantatra tsy ho ela ireo 500 mianadahy voaray hiofana mandritra ny 12 volana. 412 lehilahy ary 88 vehivavy. 651 tamin’ireo mpiadina 9.261 tany am-boalohany,. avy amin’ny foibem-panadinana miisa 14 manerana ny Nosy, no nanao ny dingana faharoa.
Notanterahina omaly Sabotsy 2 Oktobra 2021 ny « délibération ». Nanatrika izany ireo tompon’andraikitra avy ao amin’ny BIANCO, ny FOP, ary ny « cellule anti-corruption » DRAP Atsinanana, niaraka tamin’ny DGAP sy DirENAP.
Araka ny vaovao voaray dia tsy nisy ny olana fa nizotra am-pilaminana ny asa, voahaja an-tsakany sy an-davany ny fepetra mifandraika amin’izany. Voaaro tanteraka ny fahadiovana sy ny fangaraharahan’ny fifaninanana.